Mkpụrụ Akwụkwọ Olive
Polygonum Cuspidatum Root wepụ
Andrographis Paniculata wepụ
Tongkat Ali wepụ
Citrus Aurantium wepụ
Sophora Japonica wepụ
Oleuropein sitere na oliv oliv (Olea Europaea L.). Akụkọ ihe mere eme kwuru na Athena, chi nwanyị nke amamihe, meriri Poseidon site na ịtụ ube ya na nkume, mepụta osisi oliv na-amị mkpụrụ. Osisi oliv bụ akara nke udo, ọbụbụenyi, ọmụmụ na ọkụ, nke a maara dị ka "osisi nke ndụ". Enwere isi phenolic ise dị na epupụta oliv: oleuropein, flavonoids, flavones, flavanols na ihe ndị ọzọ na-eme phenolic. Oleuropein, nke kachasị na-arụ ọrụ nke ogige ndị a, bụ ihe bụ isi nke polyphenolic secoiridoid na akwụkwọ oliv. Ọ bụ aja aja odo ntụ ntụ na ọtụtụ-eji ahụ ike na ngwaahịa na ntecha.
Isi mmalite: Olea Europaea L.
Akụkụ Ejiri: Akwụkwọ
Usoro mmịpụta: Mwepu ihe mgbaze
Ọdịdị: Brown odo ntụ ntụ
Chemical mejupụtara: Oleuropein
Molekụla arọ: 540.52
Ngwugwu: 25kg / drum
Adị ndụ: 2 afọ
Nweta ọkọnọ: 10% -40%
1.Broad-ụdịdị dị iche iche antimicrobial ọrụ. Akwụkwọ oliv na-ewepụta dị oke irè megide microorganisms na-efe efe na ajọ ọrịa. Ọ nwere ike ịkwụsị mmalite nke ọrịa dịka oyi na ọrịa ndị ọzọ na-efe efe, ero, ebu na mwakpo yist, ọrịa nje na-efe efe nke dị nro na nke nje nje.
2. Mgbukpọ. Ọ nwere ike ichebe sel akpụkpọ anụ site na ụzarị ọkụ UV, gbochie radiesị ultraviolet na mbibi akpụkpọ ahụ akpụkpọ ahụ, na-akwalite eriri cell iji mepụta protein protein, belata mkpụrụ ndụ fiber maka ngwakọta ngwungwu nke collagen, gbochie mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ iguzogide mmeghachi omume hydrolysis, si otú a na-echebe mkpụrụ ndụ eriri , na-echebe mmadụ pụọ na mmebi anụ ahụ nke ikuku oxygen na UV kpatara.
3. Mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike. Fọdụ ndị dọkịta ejirila akwụkwọ oliv mee ihe nke ọma iji gwọọ ọgwụ na-akọwaghị ọrịa dị ka ọrịa ike ọgwụgwụ na fibromyalgia na-adịghị ala ala. Nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ na-akpali akpali nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
4. Mgbochi na ọgwụgwọ nke ọrịa obi. Mkpụrụ akwụkwọ oliv nwere ike belata mgbakasị ahụ nke erughị ala na-aga, gụnyere angina na ịkọwapụta oge. Ọ na - enyere aka iwepu fibrillation nke atrial (arrhythmias), na - ebelata ọbara mgbali elu ma na - egbochi mmepụta oxidative nke LDL cholesterol.
Nke gara aga: Flaxseed wepụ
Osote: Epimedium wepụ
Agba aja aja na-acha odo odo
Odogwu & uto
NLT 95% site na 80 ntupu
Ọnụ ọgụgụ niile
Ebu & Yist
Ngwaahịa Nlekọta Ahụike, Ntinye nri, Ngosiputa Ngwa
Ezigbo Akwụkwọ Mkpụrụ Akwụkwọ
Akwụkwọ Olive wepụ Antiviral
Akwụkwọ oliv Wepụ Liquid
Ejiri ahịhịa ahịhịa ahọpụtara